Waa kuwan waxa dadku ka dhahayaan sariirta xilliga guga iyo joodariga | Rayson
Waa kuwan waxa dadku ka dhahayaan sariirta xilliga guga iyo joodariga
Panthers waxay ka faa'iideysteen xarkaha wax ka bedelka labaad ee Mareykanka. S. Dastuurku wuxuu sharci ka dhigayaa in la xidho qoryaha qoryaha aan laga fiirsan. Dharka siyaasadeed waa natiijada koox dad ah oo ka wada shaqeeya kor u qaadista walaacyada ku saabsan arrimaha bulshada. Waxay ku sameeyaan sidaas oo ay ku jiraan dharka la isku daro.
Waxay kaloo qaadataa 10 daqiiqo ka hor intaan dawada diyaar u ahayn. Si aad u bilowdo qaadashada dawada, dhagsii daawada markii labaad. Daaweynta daroogada ayaa ka bilaabmi doonta aqoon isweydaarsiga. Marka daawadaada la daaweeyo, cudurrada bukaanku aanu lagu heli karin 10 daqiiqo gudahood. Si aad u aragto inta waqti ee hadhay ka hor intaan daroogada diyaar u ahayn, kaliya taabo mar labaad cudurradaas.
Hawo duug ah ama wasakh ah waxay sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad sida dhibaatooyinka neef-mareenka iyo hargabka oo kordha waqti ka dib. Haddii gurigaagu caaryo yahay, waxay kaloo sababi kartaa cudur aad u daran. Tallaabada ugu horreysa ee lagu nadiifinayo hawada waa in si joogto ah loo nadiifiyo tuubooyinka hawo-mareenka. Tani waxay meesha ka saari doontaa wax qashin ah ama caaryo oo hubi in hawada ku jirta foornadaada ama qaboojiyahaaga ay nadiif tahay.